Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 23/01/2021)
Obodo ọmarịcha obodo ochie ndị mara mma na Europe bụ ihe atụ magburu onwe ya nke ike nke akụkọ ntolite Europe. Quaint obere ụlọ, nnukwu katidral dị n'etiti obodo ahụ, ụlọ ndị echekwara nke ọma, na n’ámá ndị bụ́ isi, tinye na anwansi nke obodo Europe. na 5 ọmarịcha obodo ochie ndị mara mma na Europe ka dị kemgbe narị afọ.
Obodo ochie mara mma nke dị na Prague mara mma nke ukwuu. Ebe etiti obodo ahụ buru ibu, na ọmarịcha bistros, cafes, na ụlọ nri. The square bụ zuru okè n'ebe ndị mmadụ-na-ekiri, akatabi okop Biya biya Czech, ma sọtụji pịkụl mgbe ọ na-eche ihe ngosi elekere mbara igwe. Isi ihe dị na etiti obodo ochie bụ, n'ezie, ụlọ elu mbara igwe. Ya mere, ya ejula gị anya ma ị hụ ìgwè mmadụ na-eme njem nleta na-ezukọ na square kwa elekere.
Chọrọ Embed anyị blog post “5 Kasị Maa mma Old City Centres Na Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-old-city-centers-europe%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
citycenter Fairytaletowns oldcitycenter OldcitycentersEurope Train Travel TravelColmar njegharị TravelPrague TravelSalzburg